Ady lalao ho an'ny ankizilahy - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Ady lalao ho an'ny ankizilahy
Tamin'ny ankizilahy mahita fialan-tsiny foana ny hitifitra sy hiady. Ka tsara kokoa fa mitranga mandritra ny lalao voynushki-tserasera noho ny eny an-dalana. Misy afaka ny hilalao, niteny tamin'ny fahavalon'ny fitoriana atao sy ny fotoam-pianarana isan-karazany, na ny mpanjaka tafika, na ny andian-jiolahy, vahiny avy any ivelany toerana, na ny mpikomy maty. Manohitra ny olon-drehetra dia hahita ny fitaovam-piadiany, fa mba hanafika sy fiarovana mba ho mahomby, dia aza hamaivanina ny fahavalo. Izy ireo ihany koa ny mahalala ny fomba hiady, ary ny fitaovam-piadiana dia tsy misy ratsy kokoa noho ny anao. Squad manangona isan-karazany ny fitaovam-piadiana sy nanangana ny mpiambina tilikambo teo amin'ny paritra ny lalana ny fahavalo.
Lalao Voynushka tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Ady lalao ho an'ny ankizilahy
Mahery fo mamely hery
Age Of Ady 2
Hantsana Fiara Mifono Vy - 2
Effing kankana 2
iPlayer: ny ra, menaka, volamena. Ny ady ho an'ny harena
Maty Paradisa 3
Ny Expendables 3: miisa sy handringana Reloaded
Big-ady fiara mifono vy
Shooter: Modern miaramila
Baomba Izany 6
Loko fiara mifono vy
Ady tentacles: Purple fandrahonana
Epic Ady 3
Ratsy atody 2-tserasera
Epic Boss. Fighter
Tapa-kazo ady. Part 1
Mahery fo ny amin'ireo korontam-by
Fifandonana ny Olaimpiana
Hitondra amin'ny faran'izay traikefa nahafinaritra
Mitifitra ny zombies
Farany Ady lalao ho an'ny ankizilahy
Tank du tank
Fahafatesana Squad 2 Fanoherana mpanohitra mpanafika
Antso an'ny mahery fo
Ace amin'ny lanitra
Dingana telo amin'ny mamatonalina
Games voynushki no malaza indrindra sokajy ny lalao ho an'ny ankizilahy
Lalao Online Rehetra Ady lalao ho an'ny ankizilahy
Voynushka - fomba fiainan'ny ity lehilahy ity!
ny ankizilahy milalao amin'ny bobblehead loatra, fa na dia ireo izay mahalana vao mamela ny tenany mba ho entina any amin'ny maso, mbola mijanona ho mahatoky mpankafy milina, basy, BASY, slingshots. Fantatr'izy ireo marika rehetra sy nitari-dalana tsara fitaovam-piadiana amin'ny ady tetika. Ny toerana tena lalao - nihazakazaka manodidina teo an-tokotany amin'ny namana, nandamina voynushki. Ao ireo fitaovam-piadiana manokana dia hisy foana ny kilalao roa basy, grenady, ny detector, masolavitra, sabatra sy tsipìka sy zana-tsipìka. Amin'ny vanin-taona mafana dia afaka miafina ao ambadiky ny roimemy otrika na ny hazo, ary ao ny ririnina ny lalao vaovao maka tsirony amin'ny. Teo an-tokotany ny oram-panala mitombo tilikambo, fialofana, ary ny snowballs dia navadika ho fitaovam-piadiana mahafaty - grenady. Fa izany no mitranga fa ny toetr'andro no tsy mitondra ny tongotra sy ny lalao, ary avy eo dia tonga ny fanavotana ny lalao video ho an'ny ankizilahy voynushki. Izany no tsy latsa-danja traikefa mahaliana, satria manolotra ny vokatra be dia be ny fahafahana sy ny fomba hahatsapa toy ny ankapobeny, na hitombo ho azy, manomboka mitondra ny lohateny hoe ny olon-tsotra miaramila.
Lalao ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe
Ireo lalao dia aseho isan-karazany toy izany fa na dia ela-matotra zatovolahy dia tsy afaka manohitra ny fakam-panahy mba hanimba na inona na inona, na mitifitra ny roa am-polony mpanohitra. Amin'ny zava-misy simulations tsy afaka hilalao indray andro, fa manolotra ny mitandrina ny Flash Lalao fa tsy maka fotoana be sy mety ho iray alina ihany no hivory hiaraka safidy maro karazana izany. Play voynushki-tserasera dia tsotra, ary tsy mitaky fahalalana manokana ny miaramila kanto. Fa izany sy ny hatsarany. Matetika, ireo lalao dia feno rakitra soa tia vazivazy, ary ny dingana tombontsoa avy amin'ny tetika hafahafa mifanitsy. A plausibility - dia tsy ilaina singa ho an'ny fialam-boly toy izany.
Mifidiana toetra amam-panahy:
Ny ady koloboks na Emoticons - madio Fantasy mpandraharaha. Ireo roundels kely mahafinaritra mba hiasa manerana an-tsaha, fa, na dia eo aza ny manodidina tena, mahatsiaro tena mahazo aina amin ny andraikitry ny mpiady.
Ny lalao Worms (Worms), izay mpikatroka kankana nanomboka fampielezan-kevitra tena ara-miaramila, ka nanjary malaza fa na olon-dehibe ny filan'ny nofo ny olona kosa ho any aminy, mametraka azy eo amin'ny PC sy ny finday, na ny milalao amin'ny aterineto. Eto ao amin'ny Mazava ho azy fa tsy basy sy ny basy marovava, ary na dia baomba nokleary!
Toa ny biby rehetra nanapa-kevitra ny ho tonga toy ny lehilahy, satria na dia ny sokina nanangana ny tsilo sy mahita ny fifandraisana an-keriny. Afaka mitaingina ny dinôzôro fa tsy mitaingin-tsoavaly, ary ho ao amin'ny fanafihana. Amboadia koa nijanona teo an-tsisin'ny any an-tsaha sy ny jute noho ny anjarany.
Ary ny tompon-tany ny Fantasy tontolo, koa, izay tsy nizara, ka dia lasa hiady samy izy. Games ho an'ny ankizilahy voynushki hampirisika ny hijoro amin'ny lafiny iray sy ny fanampiana fandreseny. Dia toa izao tontolo izao efa lasa Uma ka handray anjara amin'ny ady sy ny samy hafa rehetra - ny biby goavam-be, voangory, jiolahy ary na virosy, vola sy tandindona tsy ho lavo any aoriana.
Medieval ady tsy latsa-danja noho ny fahita ankehitriny. Azonao atao ny miady irery, na miaraka amin'ny hafa Knight ady ao amin'ny tafika iray manontolo, nanao fahirano ny trano mimanda ny mpanohitra. Ary azonao misaotra Robin Hood no fiantraikany? Ary tsipìka sy zana-tsipìka Arm, ary straightened any anaty ala, miandry ny kalesy andriandahy manan-karena na ny mpanjaka toko mpitaingin-tsoavaly.
ny fanafihana an'i Space
Ady eny amin'ny habakabaka, ny tany, na any amin'ny rano ambanin'ny aminy - ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe tianao ny zavatra hitanao. Afaka miady, fiara fiara mifono vy, fiaramanidina, submarines, toerana mahafinaritra balafomanga na milina. Games voynushki - ny lalao ho an'ny miaramila mahery fo, izay manana tia vazivazy. Efa hatramin'ny taloha, ny ankizilahy iray tena tsotra nanana lalao - voynushki. Fitsipika marina dia tsy misy mahalala, ka tsy ary izy. Ny fototra hevitra ny toy izany lalao - ny fifandonana eo amin'ny roa manohitra azy. Ao amin'ny Mazava ho azy fa nandeha mandritra - tafondron-drano, tanana, tapa-kazo. Angamba ao amin'ny ran'ny olona ny herisetra mitaky be dia be ny toerana, na dia eo aza ny zava-misy fa ny fiaraha-monina ankehitriny intsony azy ireo ny miaramila mitaky fahaiza-manao. Noho ny fahatongavan'ny solosaina voalohany voynushki nentina nankany amin'ny virtoaly toerana - mpandefa zana saiky mitovy taona ny solosaina manokana ankehitriny. Dia manolotra anao sy hiady amin'ny an'ady, lalao an-tserasera milalao lalao ady.